DYSMANTLE: zita idzva rakaburitswa rauchada ... | Linux Vakapindwa muropa
10tons Ltd, inzvimbo yekuvandudza studio kuseri kwemazita akadai seCrimsonland, Neon Chrome, Time Recoil, JYDGE, Tesla vs Lovecraft nevamwe vakabudirira uye vanozivikanwa kwazvo munyika yemitambo yemavhidhiyo. Zvakanaka ikozvino ane new bombshell news, yake nyowani kusunungurwa, yake DYSMANTLE zita. Saka kana iwe waifarira iyo mimwe mitambo yemavhidhiyo yandataura mundima ino, zvirokwazvo uchazofarira iyi nyowani uye iwe uchazoda kuziva nezvezvazvino nhau nekufamba mune izvi.
DYSMANTLE mutambo wevhidhiyo uyo unokuisa iwe pachiwi apo nguva inoita kunge yakamira pakati iwo makumi manomwe nemakumi mapfumbamwe mushure mezviitiko. Iyo nyaya inotanga ne protagonist mune ino chaiyo nyika uye maari maanofanira kuwana zvimwe zvakavanzika zvezvakaitika. Naizvozvo, iwo musoro unosanganisira chiito, RPG, yakavhurika nyika uye kupona, zvese zvakabatanidzwa kuti uzviwidzise mune inonakidza nyaya ye digital varaidzo.
Sezvaunoziva, yatove yakasimbiswa kuNintendo Swift, Xbox uye PS4. Asi zvakare kune rutsigiro rweLinux. Chinhu chinokosheswa tichitarisa izvo zvinovimbiswa nemusoro, kuti tivaraidze uye tifadze vese vashandisi veLinux vanoda kuwana zita iri, uye nekuti, hatisi kuzoramba, isu tine shungu uye tinokorokotedzwa kana mutsva mutambo wevhidhiyo uri yakaziviswa kune yedu chikuva…
Kune mazana e yakanaka kwazvo mitambo yemavhidhiyo inouya kuLinux iyi 2019, saka iwo anodarika 5000 mazita ane 2018 apera anogona kuzova akawanda mukupera kweiyi nhanho. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kuona zvimwe zvakawanda muchitoro cheValve, chiutsi. Nenzira, ini ndinokuzivisa iwe kuti izvo zvinodiwa ndeUbuntu 16.04 kana SteamOS, 2Ghz CPU, 2GB ye RAM, uye 600MB yekuchengetedza kwemahara, saka hadzisi dzakanyanya kudikanwa uye dzichasangana nevazhinji vatambi, kunyangwe vaine makomputa. mukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » DYSMANTLE: zita idzva rakaburitswa kuti uchafarira ...